Indlela yokuthola i-visa yaseVietnam | Vietnamimmigration.com official website | e-visa & Visa On Arrival for Vietnam | Lowest Price Guarantee, From US$6
Indlela yokuthola i-visa yaseVietnam
› I-Visa YaseVietnam Etholwa Lapho Ufika
Sicela ukhethe okukodwa mayelana ne-visa kulokhu okulandelayo.
Ukuthola i-visa etholwa lapho ufika esikhumulweni sezindiza osilandile
Ngokungafani nama-visa atholwa lapho ufika akwamanye amazwe, ukuze uthole “i-Visa Etholwa Lapho Ufika” eVietnam, kumele ube nencwadi egunyaza i-visa ebhalwe nguMnyango WezokuFika waseVietnam ekuvumela ukuthi uthathe i-visa yakho nxa ufika esikhumulweni sezindiza samazwe onke saseVietnam.
Siyakwazi ukukulungisela incwadi egunyazayo, ukuze uthathe kaulula i-visa etholwa lapho ufika yaseVietnam esikhumulweni sezindiza.
Uyakhuthazwa ukuba ume ekhawunteni lokufika lama-visa (esibizwa nangokuthi ihhovisi ye-visa etholwa lapho ufika) ukuze uthathe i-visa yakho ngaphambi kokwamukelwa ekuhlolweni-kwephasipothi.
Nansi inqubo yethu yokuthola i-visa etholwa lapho ufika.
Khokha ku-intanethi ngekhadi lesikweledu noma uPayPal.
Yethula bese ushicilela ikhophi yencwadi egunyaza i-visa ukuze wazi ukuthatha i-visa yakho etholwa lapho ufika.
Emva kokuthatha i-visa yakho edeskini lokufika lama-visa, bakhombise i-visa yakho endaweni-yokuhlola eyokungena eVietnam,
Bhalisela i-e-visa (izinsuku ezingu-30, ungena kanye)
I-E-visa iyavunyelwa uma ungena eVietnam ngesikhumulo sezindiza, amachweba olwandle nemingcele yomhlaba, kodwa, isebenza izinsuku ezingu-30 kuphela futhi ungena kanye. Labo abadinga ukungena kaningi noma ukuhlala izinsiku ezingaphezu kuka-30 kufanele bakhethe inketho ye-visa etholwa lapho ufika, hhayi i-e-visa.
Ukuze uthole i-e-visa yaseVietnam (izinsuku ezingu-30, ungena kanye), ungabhalisa ku-intanethi kuwebhusayithi esemthethweni kahulumeni https://immigration.gov.vn
Noma uma ufuna ukuthola i-e-visa yaseVietnam ukhululekile, ungabhalisa ngewebhusayithi yethu. Sicela uqaphele ukuthi intengo yethu ibiza ukwedlula kahulumeni, kodwa sikhokhisa umbhaliso ophumelele futhi sinikeza isiqiniseko sokubuyisela imali uma ungajabulile.
Ngezansi yinqubo yethu mayelana ne-e-visa yaseVietnam.
Yethula bese ushicilela ikhophi yencwadi egunyaza i-visa ukuze wazi ukungena eVietnam.
Bakhombise i-e-visa yakho endaweni-yokuhlola ukuze ungene eVietnam.
* Uma ufuna ukuhlala eVietnam izinsuku ezingaphezu kuka-30 noma ufuna i-visa ekungenisa kaningi, khetha inketho 1 noma inketho 3.
CELA I-E-VISA KU-INTANETHI
Bhalisela i-visa yaseVietnam ehhovisi lenxusa laseVietnam
Ukuze bathola i-visa ehhovisi lenxusa laseVietnam, kudingeka ukuthi ababhalisi bezihambisele amafomu okubhalisa nezincwadi ehhovisini ngqo.
Uxwayiswa ukuba uthintane nehhovisi lenxusa ukuze uthole ulwazi olungeziwe (isikhathi sokuvula, izincwadi ezidingwayo, ifomu lokubhalisa i-visa, intengo,….) ngaphambi kokufika ehhovisi lenxusa.
TAGS I-Visa YaseVietnam yokuthola i-visa yaseVietnam
I-Visa YaseVietnam Etholwa Lapho Ufika March 4, 2021
I-Visa Etholwa Lapho Ufika (VOA) ngenye yohlobo lwe-visa ekhishwa nguMnyango WezokuFika waseVietnam enikeza izivakashi ezifisa ukungena ezweni.